Deepin inozivisa kuti haichazotorera huwandu hwe data kuburikidza neDeepin Chitoro | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura Chirevo chakakosha chakaitwa pawebsite yeDepin mairi mairi paaregedza kuunganidzwa kwedata, ichi chi mukupindura kune kukakavara kukuru kwakange kwagadzirwa mwedzi mishoma yapfuura.
Iko mushandisi akataura kuti iko kugovera kwakatarisa kune vashandisi uye kwakaunganidzwa data yeaya kuburikidza neiyo system app chitoro.
Kuedza kupedza runyerekupe, iye munhu anotarisira Deepin akapa mhinduro. Kubva ikozvino zvichienda mberi, iyo system haichazotorera huwandu hwehuwandu. Naizvozvo, Deepin haizotora data yemushandisi.
Ichokwadi kuti masisitimu anoshanda anowanzo kuunganidza rumwe ruzivo, kubva pane chirevo chekukanganisa kuenda kune zvaunofarira mushandisi (ndeipi webhurawuza yaunoshandisa, resolution yechiso, Hardware, nezvimwe.
Izvi ndezvekuti zvishoma nezvishoma zvivandudze sisitimu uye nokudaro zvinopa chiitiko chiri nani kune vashandisi vayo uye nekuzvichengeta mumusika.
Kunyangwe mukufunga kuti hachisi chinhu chitsva, avo vane basa kuna Deepin vakagadzirisa nyaya yacho.
Nenzira iyi, munhu anotarisira Deepin OS anotizivisa kuti "iyo yekupedzisira-kumagumo kweDainin chitoro peji rewebhu", uye CNZZ inozivikanwa yeInternet nhamba yekuongorora sevhisi muChina kungoita Google Analytics.
Iyi mhando yebasa inopa iko kuunganidzwa kweruzivo musingazivikanwe, senge vhezheni yewebhu webhu, iyo skrini resolution uye zvichingodaro «.
"Vamwe vashandisi vanofunga kuti kodhi inoshandiswa muCNZZ Deepin Store Statistics iri kuunganidza zvakavanzika zvevashandisi, kunyanya kune vamwe vashandisi vakarerekera kunze kweChina, mashandiro eChina anoonekwa seasina kuvimbika."
Vanhu ve Deepin vanopokana kuti kushandiswa kweuyu mupi webasa "CNZZ" yakaverengerwa kuti uone matambudziko epeji yewebhu, tora ruzivo uye upe vashandisi ruzivo rwakanaka uye runogutsa.
Kunyange isu tichida kuti iwe uzive kuti sei tichiunganidza ruzivo uye kutibatsira kuvandudza chigadzirwa mhando pamwe chete, isu tinosarudza kuremekedza pfungwa nemazano enhengo dzemunharaunda. Mune vhezheni itsva, tinobvisa zviverengero kubva kuchitoro cheCZZZ Deepin, tichidzivirira kuturikirwa zvisizvo.
Deepin haizotora data yemushandisi
Tichifunga izvi, iye munhu anotarisira Deepin Ini ndinovimbisa kuti iyo Internet nhamba yekuongorora sevhisi "CNZZ" yabviswa muchitoro chechitoro "Deepin Chitoro". Izvi kuitira kupa mhinduro kumakuhwa nemakakatanwa akagadzirwa kamwechete.
Ivo avo vari kupokana naDepin, ndapota funga zvine chinangwa. Inofananidzwa neyakavharwa sosi Microsoft uye Mac OS, Deepin OS yakavakirwa paLinux, saka iri pachena uye yakavimbika, iyo inoteera misimboti yeakavhurika sosi nharaunda uye Deepin akagovana sosi kodhi yeumwe neumwe wezvaunoshandisa.
Chero ani zvake akagamuchirwa kuongorora uye kuongorora. Kana paine chero chekuchengetedza nyaya, ndokumbira utizivise uye isu tichava nemhinduro chero nguva kana mune ramangwana kusunungurwa.
Pakupedzisira, Iye munhu anotarisira Deepin anoona kuti kugovera pamwe nechikwata chayo chebasa chine uye chichava nekuzvipira kwakasimba kuhurongwa pamusoro pekupokana kuti Deepin haadi kuunganidza ruzivo rwemunhu yevashandisi, kwete nhasi chete, asiwo mune ramangwana.
Kana iwe uri vashandisi vechazvino vhezheni yeDepin usazvidya moyo, mune iyi vhezheni iwe hausisina dambudziko iri muDestin Chitoro.
Kana zvakawanda zvataurwa, tinoda kuziva maonero ako nezvazvo, iwe unofungei nezverudzi urwu rwemamiriro ezvinhu, ndezvechokwadi here kana zvinopesana nemushandisi
Canonical yechikamu chayo mune yazvino vhezheni yayo system inova "Ubuntu 18.04" kubva kuisheni yekumisikidza, inokumbira mushandisi mvumo yekutora data. Izvo zviri pachena uye zvenguva iyo zvakamushandira iye.
Iwe unofunga kuti Deepin anofanira kuita zvakafanana kana kungosiya nyaya yacho kunze?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Deepin inozivisa kuti haichazotorera huwandu hwehuwandu kuburikidza neHedin Store
Uye zvakadii neiyo luks encryption nzvimbo iyo yakawanda yekuparadzira linux inopa? Nei Deepin isingaipe senge linux mint debian edition? Ini ndinofunga zvakakosha kucherechedza zvakavanzika marongero izvo zvimwe zvekugoverwa zvave nazvo.
Isa iyo Kernel Yakajeka Kernel pane Fedora 28 uye zvigadzirwa